Iindaba -I-Huiyu Fluid iye kwi-Analytica 2018 eMunich eJamani
I-Huiyu fluid yaya kwi-Analytica 2018 eMunich eJamani. Umnquba kaHuiyu, i-B1.528-6 #, Iimpompo zethu zomgangatho weendleko ezisebenzayo ezixabisa amakhulu abatyeleli abaziingcali.
I-analytica yorhwebo ekhokelayo kwihlabathi ibisisiqinisekiso sakho sokwenza ngempumelelo itekhnoloji yelabhoratri kunye ne-biotechnology ejolise kwikamva phantse iminyaka engama-50. Yeyona ndibano ibaluleke kakhulu kushishino kwaye idibanisa lonke uluhlu lwezihloko ezinxulumene neelebhu kuphando nakushishino.
Eyona ndibano inkulu ehlabathini - urhwebo lwamazwe ngamazwe
i-analytica yeyona ndawo iphambili yentengiso yeemveliso kunye neenkonzo kuwo onke amaxabiso exabiso eenkqubo zelebhu zangoku. Kulapho badibana khona abadlali abaphambili bemveliso kunye nabenzi bezigqibo.
Bonke ababonisi be-analytica 2020
Amacandelo emiboniso yolwakhiwo-Isilinganiselo esipheleleyo
I-analytica kuphela ekunika isishwankathelo esibanzi salo lonke uluhlu lwezihloko ezinxulumene nelabhoratri kuphando nakwimizi-mveliso.
● Uhlalutyo kunye nolawulo lomgangatho
● Biotechnology, Life Sciences kunye diagnostics
● Itekhnoloji yeLebhu
Ubungcali obugxile kakhulu-Ingqungquthela yohlalutyo
Ingqungquthela yeentsuku ezintathu yohlalutyo yintliziyo yesayensi ye-analytica. Iingcali ezaziwayo zixela imeko yangoku yezinto ezintsha zamanye amazwe. Inzuzo evela kwincoko yencoko ekhuthazayo kunye nososayensi abaziwayo abavela kwihlabathi liphela.
Ukudluliselwa ngokuthe ngqo kolwazi ekusebenzeni-Inkqubo yohlalutyo lweziganeko ezinxulumene noko
● Inkqubo yokuziqhelanisa nokuziqhelanisa neziganeko ezinxulumene noko ijikeleze kugqithiso lolwazi, iingcebiso malunga nokusebenza kunye notshintshiselwano ngqo lweengcamango nolwazi.
● IiLebhu zethu eziPhila zibonisa ubuchwephesha besicelo kunye neenkqubo zezixhobo kwindawo enomdla, yokwenene yelabhoratri.
● Sebenzisa amaqonga ngezihloko ezithile ukubamba iingxoxo neengcali zamanye amazwe kunye noogxa bakho.
● Yiya kwimiboniso yethu ekhethekileyo kwizihloko ezishushu ezinje ngo “Ukhuseleko Emsebenzini / Impilo noKhuseleko kwindawo yokuSebenza”.
● Inkqubo yeziganeko ezinxulumene noko iqukunjelwa ngemixholo yeentsuku ezithile ezinje nge "analytica Job Day" kunye "noSuku lwezeMali" kunye neminye imibhiyozo exabisekileyo.